Paul Scholes oo Tilmaamay Cayaaryahankii ugu fiicnaa ee uu abid ka horyimaado? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Paul Scholes oo Tilmaamay Cayaaryahankii ugu fiicnaa ee uu abid ka horyimaado?
Published on September 22, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(23-9-2018) Cayaaryahankii hore ee Kooxda Man United Paul Scholes ayaa shaaca ka qaaday xiddigii ugu fiicnaa ee uu wajaho xirfadiisii ciyareed xilli uu ka qayb qaadanayay casho sharaf ay qaban-qaabiyeen xiriirka xiddihii hore ee kooxda Man United.
Scholes ayaa ka hadlay xafladaas xirfadiisii ciyaareed ee uu qaabka fiican kula soo qaatay kooxda Red Devils ee uu tababarihii hore kooxda Man United ee Alex Ferguson ku amaanay.
Sidoo kale halyeeygan ayaa doortay goolkii ugu fiicnaa ee uu u dhaliyay kooxda Man United intii uu u ciyaarayay isaga oo doortay gool uu meel foga ka dhaliyay kula ay la ciyaarayeen kooxda Aston Villa sanadkii 2006.
Scholes oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri” Waxa laga yaabaa in uuna muhiimad lahayn maadama uu dhashay kooxda oo guusha xaqiiqsatay laakiin waxa uu nasiiyay In aan hubino in aanu kulanka dilnay”.
Xiddiga oo la waydiiyay in uu shaa ka qaado xiddigii ugu fiicnaa ee uu ka hor tagay ayuu doortay xiddiga ahna halyeeyga kooxda Barcelona ee Andres Iniesta oo ka soo baxay Akademiyada kooxda Barcelona ee La Masia ka hor inta uuna kooxda u ciyaarin in ka badan 400 oo kulan kulana guulaystan koobab badan.